Nagu saabsan - Changlin Industrials Co., Ltd.
Changlin Industrials Co., Ltd. oo la aasaasay 2017, waxay ku hawlan tahay soo saarista bacaha la isku qurxiyo, bacaha dharka lagu dhaqo, bacaha musqusha, bacaha hadiyadaha, bacaha baakadaha, boorsooyinka xayeysiinta, bacaha wax lagu iibiyo, bacaha xeebta iwm. Changlin waa dhirta laanta Jiafeng caaga Products CO., LTD halka Jiafeng uu leeyahay wax badan 20 sano oo waayo aragnimo ah samaynta bacaha la isku qurxiyo.
Changlin wuxuu daboolayaa aagga dhismaha ee mitir laba jibbaaran 17000 wuxuuna leeyahay qalab farsamo oo horumarsan, koox naqshadeeyayaal khibrad leh iyo in ka badan 150 shaqaale xirfad leh. Waxaan leenahay laba xariiq oo wax soo saar oo waaweyn: tolliinno xariiqda bacaha iyo xariijinta bacaha xirmooyinka Heat. Awooddeena bil kasta ee bacaha waa 1 milyan oo unug, waxaa loo dhoofiyaa Yurub, waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Australiya, Aasiya oo deggan, Bariga Dhexe ……
Iyada oo ay ku jirto ruuxda "u-huro-gelinta, hal-abuurnimada, wada shaqaynta, shaqada adag" iyo qaabka shaqada ee ah "hufnaan, waajibaad, isgaarsiin, heer sare", dhammaan shaqaaluhu waxay siiyaan macaamiishii hore iyo kuwa cusub alaabada iyo adeegga ugu fiican. Iyada oo ku saleysan khibradeena buuxda ee 20 sano ah alxanka iyo tolida farsamada, waxaan ka gudubnay shahaadada ISO9001, waxaan heysanaa warbixinta Hantidhawrka SA8000, SEDEX, L'Oréal, LVMH, mar walbana waxaan ku soo wada barbaareynaa sumado aad u fara badan , sida hoosta: L'OREAL （Oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn YSL, HR, LANCOME, VICHY, LA ROCHE-POSAY, Kiehl's),LVMH （Marka lagu daro laakiin aan ku xaddidnayn BVLGARI, Givenchy ， GUERLAIN, SEPHORA, Faa'iidada） BURBERRY 、 ESTEE LAUDER (oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn LA MER, Jo Malone London, CLINIQUE, Bobbi Brown, MAC) 、 SISLEY 、 L'OCCITANE 、 MALAHAN 、 P & G 、 ISDIN 、 NUXE 、 LACOSTE, iyo iwm.
Iyadoo la tixgelinayo horumarka waara, hadda waxyaabo badan oo deegaanka u habboon ayaa loo isticmaalay noocyo kala duwan oo halkan ah: Cudur dabiici ah ama dabiici ah Cudurka iyo dharka wanaagsan ayaa meel walba lagu yaqaan, Qalabka RPET ayaa jidka ku soo socda ， halka Recycled EVA ama Recycled TPU noqon doonto isbedelka cusub. Maaddooyinka fiber-ka cusub ee dhirta sida dharka cananaaska iyo dharka mooska ayaa la soo saaray oo laga faa'iideysanayaa. Changlin waxaa ka go'an inay soo saarto alaabooyin badan oo ilaalinta deegaanka ah, ayna ku biiriso xooggeena u gaarka ah ilaalinta deegaanka ee dhulka.
Na sii nashqaddaada, waxaan ka dhignaa mid dhab ah!
Waxaan kuu xaqiijineynaa in Changlin uu noqon doono mid ka mid ah la-hawlgalayaashaada wax iibsiga ugu kalsoonida badan ee xirfadlayaasha ah!
Waa rabitaankeenna inaan ku siino alaabada ugu fiican iyo adeegga wanaagsan, waxaanan si diiran u soo dhaweynaynaa OEM / ODM.
Waxaan ka gudubnay xisaabinta L'Oréal, LVMH, SEDEX 4 tiir, waxaan haysannaa shahaadada ISO9001 iyo SA8000